Electric khahlela isikuta
Fat iTire E-ibhayisikili
700C European E-ibhayisikili
Okunye izingxenye ezisele & izesekeli
Old imoto esikhundleni ukuhamba
umlawuli ku 16-02-26
Lokhu iphephandaba ngo-December 16 (intatheli umkhankaso umlobeli Ssangyong ma) izolo, i ukuhamba imoto abadala ikwazi ungene nomendo. Ngenxa amaphoyisa omgwaqo ngesivinini ingatholakalanga kusenesikhathi, uzakwenza lokhu imoto ESIKHUNDLENI SOKUTHI AHAMBE ephelezelwa ngesivinini, ukugwema yingozi. Just like QQ imoto, ...
10 izindlela i-E-ibhayisikili ungagcina imali
Uma ecabanga ukuthenga i-E-ibhayisikili, kodwa hhayi isiqiniseko kokuchitha imali, lesi sihloko angakusiza bahlanganise isinqumo esifanele. Uma uyisebenzisa, i-E-ibhayisikili empeleni ugcine imali yokukhokhela ngokwalo ngesikhathi esifushane. Comfortebike.com ibeke uhlu lwamaphuzu abonisa 10 i kagesi ibhayisikili c ...
Chengdu iyokwakhiwa ka Scrap nomthofu-acid amabhethri for kagesi amabhayisikili kabusha uhlelo
umlawuli ku 14-12-18
"Economic Imininingwane Daily" umlobeli kusukela Chengdu City Environmental Protection Bureau, ukuthuthukisa inethiwekhi kabusha, ngcono kabusha izakhiwo kanye zonke izindawo, ukuze ukungcoliswa kuyehla kube sezingeni eliphansi, Chengdu kuyoba ukusungulwa imfucuza nomthofu-acid batteri .. .
Zhengzhou kokuhlolisisa semfene isikuta abadala
Kusukela ngo-December 15, Zhengzhou womnyango wamaphoyisa behlola ukwephula isikuta abadala endleleni okokuqala ukuba bazihlole futhi abeke ukumiswa okwesikhashana isixwayiso imoto noma inhlawulo, umshayeli ngeke ihlolwe futhi ejele isijeziso. Ekuseni, ku wa ...
Road Imithetho Mobility Izikuta
Ukuze alondoloze impilo ngimatasa futhi ngizenzela, abanye abantu abakhubazekile kanye nalabo abangakwazi esezigugile ancike ukuhamba Scooters ukuhambahamba. Kunezindlela eziningana kwemithetho ezweni lonke ezifundeni ezihlukahlukene mayelana Scooters luphumelele. Kubalulekile ke, qikelela ukuba imithetho endaweni neziqondiso kabusha ...
Liyini Difference Between i ngesitulo samasondo Electric & a Mobility Scooter?
Ngenxa nezindaba ezihlukahlukene zofuzo, ukulimala noma ukuguga, abantu ngezinye izikhathi ziye azibalulekile ukuhamba kanye bathembele kumadivayisi ezinamasondo ukuhambahamba. Laba bantu kudingeke ukhethe phakathi i sabakhubazekile kagesi isithuthuthu ukuhamba. Zombili lezi amadivaysi uzothola umuntu lapho efuna ukuya khona ezimweni eziningi, kodwa ...
Ubani ukuza ebaluleke kakhulu yendabuko abakhiqizi imoto eyi-BMW kagesi aphume phezu
Eminyakeni yamuva, abezindaba sekube khona oyothi ukuthi emakethe kunezimoto eziningi kagesi, limane nje ukuhlangabezana Inqubomgomo zero-kwekhabhoni yaseCalifornia (ngo-1990, inqubomgomo kudinga ukuba ngamunye izimoto zero-ekushayweni lekufanele akhicitwe izinkulungwane abakhiqizi ukuthengisa ca ...
10 Imfihlo Izinzuzo Intrinsic i Electric Hamba
Lolu hlu ayisetshenziselwa ishicilelwe ekhasini lokuqala ngoba eziningi okuqukethwe kule ndaba kukhona imfihlo. Thina sigibela okusheshayo emabhayisikili kagesi abe kukuhle, futhi akuyona ufuna wonke umuntu ukwazi indlela ezinhle sayithola. Sibhekene injabulo yokuya ekwehleni ngisho nalapho ugibele amafulethi ...
No.588 huatai komgwaqo, Jinhua idolobha, Zhejiang